स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भएको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आफू पनि संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको सदस्य भएको नाताले र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आफू नै समितिको बैठकमा सहभागी भएको सुनाए । उनले भने, “उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने एउटा कुरा आयो । फेरि दोस्रो कुरा के आयो भने ५ भन्दा बढी नदिने । फेरि तेस्रो कुरा के आयो भने जोसँग आफ्नो मेडिकल कलेज छैन, त्यसलाई दिन नपाउने ।”
डाक्टर केसीका समर्थक डा. अभिषेक प्रताप सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरुलाई दुःख लागेको बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले हामीलाई दुःख लागेको छ । अब राज्यमाथि शंकाको प्रश्न उठेको छ ।”
सरकारले अहिले इगो देखाइरहेको पनि उनले गुनासो पोखे । सिंहले भने, “डाक्टर केसी तीन करोड नेपालीको हित र पक्षमा सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । तर, सरकारले आफै गरेको सम्झौता पालना गरेन । समस्या राज्यबाट नै सिर्जना भएको छ । अब समाधान पनि उहाँहरुबाटै हुनुपर्छ ।” उनले वर्तमान सरकार मुद्दा केन्द्रित नभएको पनि जिकिर गरे ।
डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थक एवम् अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारले नै अहिलेको समस्याको सिर्जना गरेको हो । अब यसको समाधान पनि सरकारले नै गर्न सक्छ ।” डाक्टर केसीको अनशन आम नागरिकको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । दुई तिहाईको नाममा वर्तमान सरकार निरंकुश बन्दै गैरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे, “सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौता पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।” अबको समाधान भनेको नै सरकार लचिलो बन्नुपर्ने उनले सुझाए ।
आफूहरुले अहिले संविधानको सर्वोच्चतामा रहेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीसँग गरेको सम्झौता पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री भनेको त मुलुकको अभिभावक हो । अभिभावकले ढाँट्दैन । कतै प्रधानमन्त्री संसदमा अल्पमतमा त हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । उहाँले आफै सम्झौता गरेको कुरा किन लागू गर्नुभएन ? किन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुभएन ? प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले उदण्ड रुपमा बोल्न मिल्दैन ।”